Daraasad cusub oo ku saabsan cabbidda khamriga xad-dhaaf la'aan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Daraasad cusub oo ku saabsan cabbidda khamriga xad-dhaaf la'aan
La daabacay fredag 15 november 2013 kl 16.30
In ka badan boqolkiiba konton dadka khamriga cabbidiisa qabatimay ayaa isbari kara in ay khamriga u cabbaan si aan xad dhaaf ahayn. Sidaasna waxaa daabacay wargeyska Svenska Dagbladet oo ka soo xigtay daraasad cusub oo dhowaan soo baxday.
Sven Andreasson oo caalin ku takhasusay caafimaadka bulshada ayaa sheegay in uu khiyaali yahay feker oranaaya in gebi ahaan la iska joojiyo cabbida khamriga si looga badbaado dhaawacyada cabbitaanka khamrigu keeno.
Dadka ay dhibaatada ugu ballaarani ka haysato cabbitaanka khamriga waxaa xaqiiqadii laga dalbayaa in ay gebi ahaanba iska dhaafaan. Waxaa jira dad iswiidhish ah oo tiradoodu gaareyso nus milyan oo khamriga u cabba si halis ku caafimaadkooda, aanna helin caawimaad sidaas u sii weyn in kastoo aysan wax dhibaato ah ku qabin la dhaqanka bulshada iyo qoysaskooda. Sidaasna waxaa yiri Sven Andreasson. Wuxuu intaas ku daray in loo baahan yahay in daraasad lagu sameeyo cabbitaanka khamriga kadibna loo dejiyo hadafkii wax looga qaban lahaa.
Waa kan Sven Andreasson iyo mar kale:
- Marka daraasad iyo daraasad lagu sameeyo waxaa jira dad badan oo ku guuleysta wax ka beddelka caadada cabbitaanka khamriga. Waxaan oran karnaa boqolkiiba konton waa ay ku guuleystaan, kuwaas oo u cabba hab qabatin oo aan xad dhaaf ahayn. Faa’iidada aan daraasad ka heleyno ayaa ah in dad badani ay doorbidaan in laga daaweeyo qabantinkaas.